» माछापुच्छ«े बैंककोबीसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ,डा. महतो अध्यक्ष चयन
माछापुच्छ«े बैंककोबीसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ,डा. महतो अध्यक्ष चयन
काठमाडौं । माछापुच्छ«े बंैक लिमिटेडको बीसौंवार्षिक साधारण सभा आज होटलपोखरा ग्राण्ड, पोखरामा बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष रोशन केसीको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो ।
उक्त साधारण सभाले बैंकको आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बार्षिक प्रतिबेदन पारित गर्नुका साथै बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरुलाई हालको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत नगद लाभांशप्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, उक्त साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि जी.पी. राजवाहक एन्ड कम्पनीलाईलेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उक्त साधारण सभाले संस्थापक समूहका शेयरधनीहरुको तर्फबाट डा.बिरेन्द« प्रसाद महतो, रोशन के.सी. र गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा निर्बिरोध निर्वाचित गरेको छ ।साथै, उक्त साधारण सभा सम्पन्न भए पश्चात् बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डा.बिरेन्द« प्रसाद महतोज्यूलाई बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ९६ लाख रुपैंया खुद नाफा गरेर प्रतिशेयर आम्दानी १५ रुपैंया ८१ पैसा कायम गरेको थियो । बंैकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपंैया तथा साधारण जगेडा कोषमा १ अर्ब ११ करोड रुपंैया संचित छ ।
देवः विकासको भाटभटेनीमा नयाँ एटिएम सञ्चालनमा
बैंकको व्याजदर घटाउन निर्यातकर्ताको माग
सिटिजन्स बैंकको ८१ औं शाखा कैलालीको मोहन्यालमा
आइएमई डिजिटल र जनता बैंकबीच सम्झौता